လေယာဉ်က စက်ချိူ့ယွင်းလို့ အရေးပေါ်ဆင်းသက်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာက အလုံခြုံဆုံး ဖြစ်မလဲ ? | MyTech Myanmar
လေယာဉ်က စက်ချိူ့ယွင်းလို့ အရေးပေါ်ဆင်းသက်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာက အလုံခြုံဆုံး ဖြစ်မလဲ ?
မေလ ၁၂ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတုန်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Myanmar National Airlines (MNA) လေကြောင်းလိုင်းက လေယာဉ်တစ်စင်း မတော်တဆ ဖြစ်ပွားခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတော်တော်များများ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လေယာဉ်မှုး ( Capt )ကပ္ပတိန် ကိုမြတ်မိုးအောင် ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အတွေ့အကြုံက စကားပြောတဲ့ ပညာအရည်အချင်းတွေကြောင့် လေယာဉ်ပေါ်မှာ လိုက်ပါစီးနင်းခဲ့တဲ့ ခရီးသည်အားလုံး ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ မြေပြင်ပေါ်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Embraer 190AR (The Voice)
MNA လေကြောင်းလိုင်းက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Embraer 190AR အမည်ရှိ လေယာဉ်တစ်စင်းဟာ ရန်ကုန်ကနေ ထွက်ခွာပြီး မန္တလေးသို့ ဆိုက်ရောက်ဖို့ ပြင်ဆင်ချိန်မှာ Nose Landing Gear လို့ခေါ်တဲ့ လေယာဉ်ဦးပိုင်းက ရှေ့ဘီး ချမရခဲ့တာကြောင့် လေယာဉ်ကို ဆီကုန်အောင်မောင်း၊ အင်ဂျင်စက်သတ်ပြီး မြေပြင်မှာ ဦးတိုက် ဆင်းသက်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လေယာဉ်မှုးရဲ့ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု့ကြောင့် ခရီးသည်များ သေကံမရောက် သက်မပျောက်ခဲ့ကြပေမယ့် လေယာဉ်မှုးသာ ဆုံးဖြတ်ချက် တစုံတရာ အမှားအယွင်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် (ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်) မတွေးဝံ့စရာ အနေအထားပါ။ ဒါ့ကြောင့် လေယာဉ်စီးနေစဉ်မှာ မည်သို့သော အကြောင်းအရင်းများ ကြုံလာခဲ့သည်ရှိသော် လေယာဉ်ထဲက ဘယ်လိုမျိူးနေရာဟာ သင့်အတွက် အလုံခြုံဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ MyTech Myanmar ကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လေယာဉ် မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုဆိုတာ တော်တော်လေးကို ရှာပါးတဲ့ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဖြစ်ရပ်ပါ။ ဖြစ်ခဲပါတယ်။ တကယ်လို့ လေယာဉ်ဟာ စက်ချိူ့ယွင်းပြီး တစုံတရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ (Emergency Landing) မြေပြင်ပေါ်ကို အရေးပေါ် ဆင်းသက်ရမယ်ဆိုရင် ထိုင်နေဖို့ အသင့်တော်ဆုံး နေရာက လေယာဉ်ရဲ့ နောက်ပိုင်း/နောက်မှီး မှာ တည်ရှိနေတဲ့ အလယ်ခုံတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လေယာဉ် မတော်တဆမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုတသနပြုလုပ်နေတဲ့ သူတွေဟာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွေနဲ့ (Crash Tests) လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ စမ်းသပ်ချက်တွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ များသောအားဖြင့် လေယာဉ်ဦးပိုင်းက အန္တရာယ်အရှိဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး၊ အမှီးပိုင်းကတော့ အလုံခြုံဆုံးနေရာဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၉၈၄ခုနှစ်မှာ ခရီးသည်တင် လေယာဉ်ကြီးကို ပထမဦးဆုံး Crash Tests စမ်းသပ်ချက် ပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း၊ နောက်ထပ် Crash Tests ပြုလုပ်တာမျိူးတွေ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ခုနှစ်တုန်းကတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ Boeing 727 စမ်းသပ်လေယာဉ်ကြီးကို မက်ဆီကန် သဲကန္တာရထဲမှာ Emergency Landing အနေအထားနဲ့ အရေးပေါ် ဆင်းသက်ပြီး စမ်းသပ်ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း လေယာဉ်ရဲ့ ဦးပိုင်းက ရစရာမရှိအောင် ပျက်စီးသွားပေမယ့် နောက်ပိုင်းကတော့ အခြေအနေကောင်းနေသေးတာ တွေ့ရပါတယ်။
လယောဥျက စကျခြိူ့ယှငျးလို့ အရေးပျေါဆငျးသကျရမယျဆိုရငျ ဘယျနရောက အလုံခွုံဆုံး ဖွဈမလဲ ?
မလေ ၁၂ရကျနေ့ မနကျပိုငျးတုနျးက ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ Myanmar National Airlines (MNA) လကွေောငျးလိုငျးက လယောဥျတဈစငျး မတျောတဆ ဖွဈပှားခဲ့မှုနဲ့ ပတျသကျပွီး လူတျောတျောမြားမြား အထိတျတလနျ့ ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ လယောဥျမှုး ( Capt )ကပ်ပတိနျ ကိုမွတျမိုးအောငျ ရဲ့ မှနျကနျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ အတှအေ့ကွုံက စကားပွောတဲ့ ပညာအရညျအခငျြးတှကွေောငျ့ လယောဥျပျေါမှာ လိုကျပါစီးနငျးခဲ့တဲ့ ခရီးသညျအားလုံး ဘေးကငျးလုံခွုံစှာနဲ့ မွပွေငျပျေါကို ရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။
MNA လကွေောငျးလိုငျးက ပိုငျဆိုငျတဲ့ Embraer 190AR အမညျရှိ လယောဥျတဈစငျးဟာ ရနျကုနျကနေ ထှကျခှာပွီး မန်တလေးသို့ ဆိုကျရောကျဖို့ ပွငျဆငျခြိနျမှာ Nose Landing Gear လို့ချေါတဲ့ လယောဥျဦးပိုငျးက ရှဘေီ့း ခမြရခဲ့တာကွောငျ့ လယောဥျကို ဆီကုနျအောငျမောငျး၊ အငျဂငျြစကျသတျပွီး မွပွေငျမှာ ဦးတိုကျ ဆငျးသကျခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ။ လယောဥျမှုးရဲ့ ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျမှု့ကွောငျ့ ခရီးသညျမြား သကေံမရောကျ သကျမပြောကျခဲ့ကွပမေယျ့ လယောဥျမှုးသာ ဆုံးဖွတျခကျြ တစုံတရာ အမှားအယှငျးရှိခဲ့မယျဆိုရငျ (ရှိခဲ့မယျဆိုရငျ) မတှေးဝံ့စရာ အနအေထားပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ လယောဥျစီးနစေဥျမှာ မညျသို့သော အကွောငျးအရငျးမြား ကွုံလာခဲ့သညျရှိသျော လယောဥျထဲက ဘယျလိုမြိူးနရောဟာ သငျ့အတှကျ အလုံခွုံဆုံးဖွဈမလဲဆိုတာကို ကြှနျတျောတို့ MyTech Myanmar ကနေ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
လယောဥျ မတျောတဆ ဖွဈပှားမှုဆိုတာ တျောတျောလေးကို ရှာပါးတဲ့ ကွုံတောငျ့ကွုံခဲ ဖွဈရပျပါ။ ဖွဈခဲပါတယျ။ တကယျလို့ လယောဥျဟာ စကျခြိူ့ယှငျးပွီး တစုံတရာဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ၊ (Emergency Landing) မွပွေငျပျေါကို အရေးပျေါ ဆငျးသကျရမယျဆိုရငျ ထိုငျနဖေို့ အသငျ့တျောဆုံး နရောက လယောဥျရဲ့ နောကျပိုငျး/နောကျမှီး မှာ တညျရှိနတေဲ့ အလယျခုံတှေ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ လယောဥျ မတျောတဆမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး သုတသနပွုလုပျနတေဲ့ သူတှဟော ဖွဈပှားခဲ့ပွီးတဲ့ လယောဥျပကျြကမြှုတှနေဲ့ (Crash Tests) လယောဥျပကျြကတြဲ့ စမျးသပျခကျြတှကေို လလေ့ာဆနျးစဈကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာ မြားသောအားဖွငျ့ လယောဥျဦးပိုငျးက အန်တရာယျအရှိဆုံးနရောဖွဈပွီး၊ အမှီးပိုငျးကတော့ အလုံခွုံဆုံးနရောဖွဈနတောကို တှရှေိ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၁၉၈၄ခုနှဈမှာ ခရီးသညျတငျ လယောဥျကွီးကို ပထမဦးဆုံး Crash Tests စမျးသပျခကျြ ပွုလုပျပွီးနောကျပိုငျး၊ နောကျထပျ Crash Tests ပွုလုပျတာမြိူးတှေ မတှရေ့တော့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ခုနှဈတုနျးကတော့ သိပ်ပံပညာရှငျတှနေဲ့ အငျဂငျြနီယာတှဟော Boeing 727 စမျးသပျလယောဥျကွီးကို မကျဆီကနျ သဲကန်တာရထဲမှာ Emergency Landing အနအေထားနဲ့ အရေးပျေါ ဆငျးသကျပွီး စမျးသပျခကျြ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဗီဒီယိုထဲမှာ မွငျတှရေ့တဲ့အတိုငျး လယောဥျရဲ့ ဦးပိုငျးက ရစရာမရှိအောငျ ပကျြစီးသှားပွီး၊ နောကျပိုငျးကတော့ အခွအေနကေောငျးနသေေးတာ တှရေ့ပါတယျ။
MyTech Myanmar2019-07-15T19:55:10+06:30May 13th, 2019|Essential, News, Quiz, Science, Technology, Tips & Stories|